Bônifasy VIII - Wikipedia
Anarana : Bônifasy VIII
Teraka : taona 1235
Maty: 11 Oktobra 1303
I Bônifasy VIII dia papa faha-191 izay nanamafy ny fahefana tsy refesi-mandidy ananan' ny papa. Teraka tamin' ny taona 1235 teraka tao Anagni any Italia izy, ary maty tamin' ny 11 Oktobra 1303 tao Rôma. Teo anelanelan' ny taona 1294 sy 1303 no naha papa azy. I Benedetto Caetani no anarany tamin' ny nahaterahany.
1 Fiakarany teo amin' ny maha papa
2 Fifanolanana tamin' ny mpanjakan' i Frantsa
3 Ny asany teo amin' ny fiangonana
Fiakarany teo amin' ny maha papaHanova
Nianatra lalàna tany Bologne i Benedetto Caetani, talohan' ny nifantohany amin' ny fianarana nitondra azy mankany amin' ny haha papa azy. Voatendry ho kardinaly izy tamin' ny taona 1281 ary masoivoho (légat) tany Frantsa tamin' ny taona 1290 hatramin' ny 1291. Nandresy lahatra ny papa Selestino V mba hametra-pialana izy avy eo nandimby ity papa ity ka nitondra ny anarana hoe Bonifatius VIII.
Fifanolanana tamin' ny mpanjakan' i FrantsaHanova
Ny fotoana naha papa azy dia voamariky ny fifandonany tamin' i Philippe IV le Bel (mpanjakan' i Frantsa teo anelanelan' ny taona 1285 sy 1314). Ny fifanolanana voalohany dia nanomboka tamin' ny taona 1294 rehefa naka hetra tamin' ireo mpitondra fivavahana i Philippe sy i Edward I (mpanjakan' i Angletera tanelanelan' ny taona 1272 sy 1307) mba hamatsiam-bola ny tafika tao amin’ izy ireo. Namaly izany tamin’ ny alalan’ ny taratasy nitondra ny anarana hoe Ineffabilis amoris (tamin4 ny taona 1296) i Bônifasy, izay nampahatsiahivany fa ny mpitondra fivavahana dia afaka amin’ ny fitakiana hetra. Namaly an' izany i Philippe le Bel tamin' ny fisakanana ny famoaham-bola rehetra ho an' i Rôma.
Ny fifanolanana faharoa lehibe dia nitranga tamin' ny taona 1301 tamin' ny fitsarana an' i Bernard Saisset evekan' i Pamiers (1232-1314), izay nampangain' i Philippe le Bel ho namadika, namaly tamin' ny alalan' ny taratasy malaza nitondra ny anarana hoe Ausculta, fili (1301) i Bônifasy, izay niampangany an' i Philippe le Bel ho nihoatra ny zony. Narakarahin' ilay taratasy malaza bulle Unam sanctam (1302) izany, izay nanambara ny fahambonian' ny fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana ananan' ny papa amin' ny andriamanjaka rehetra. Niampanga an' i Bônifasy ho mpanao fampianaran-diso i Philippe, ary tsy niraharaha ireo taratasin' ny papa sady nanambara ny fikasany hanongana an' i Bônifasy tsy ho papa. Tamin' ny taona 1303 i Bônifasy dia saika hanongana an' i Philippe tsy ho isan' ny fiangonana noho ny tsy fanajany ny papa; tamin' izany no nisamboran' ny iraky ny mpanjaka azy ka nampidirana azy am-ponja. Na dia nafahana aza ny papa fotoana fohy taorian' izany dia maty telo herinandro taty aoriana, angamba noho ny fampijaliana nahazo azy.
Ny asany teo amin' ny fiangonanaHanova
Ny papa Bônifasy no namorona ny fankalazana jobily (na jobile) na ny taona masina voalohany tamin' ny taona 1300.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bônifasy_VIII&oldid=1013507"
Dernière modification le 9 Aogositra 2021, à 11:06
Voaova farany tamin'ny 9 Aogositra 2021 amin'ny 11:06 ity pejy ity.